अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी सात अर्ब घट्यो - Income of International call7arab decreased -
Income of International call7arab decreased
काठमाडौं : टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमको इन्टरनेसनल लंग डिस्टेन्स (आईएलडी) अर्थात् विदेशबाट आउने कलको आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ। यी दुई ठूला कम्पनीले विदेशबाट आउने कलको शुल्कबापत गर्ने आम्दानी आव २०७३/०७४ मा ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्। मोबाइल डाटा र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा दूरसञ्चार कम्पनीले भ्वाइस कलमार्फत हुने आम्दानी गुमाएका हुन्।
अहिले हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट छ भने एकै ठाउँबाट फोनकल, भिडियो कल, भिडियो हेर्न, म्यासेज गर्ने सकिने भएको छ। यसको असर टेलिकम कम्पनीमा देखिएको हो। ‘स्मार्टफोनमा इन्टरनेट प्रयोग गरी कल गर्दा त्यसका लागि कुन ठाउँबाट इन्टरनेट आइरहेको छ, त्यो कुनै सरोकार हुँदैन्', उनले भने, ‘एउटा एप्समार्फत निःशुल्क कल, म्यासेज, भिडियोलगायत सुविधा पाउँदा ग्राहक यसमा आकर्षित भएका छन्, यसले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा वार्षिक रूपमा गिरावट आइरहेको हो।'
अर्को ग्राहकले आफूलाई सहज हुने माध्यमका रूपमा यस्ता एप्स प्रयोग गरिरहेका छन्। यसको प्रतिफल कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छ। बाहिरबाट एप्समार्फत कल गर्दा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले साधारण कलमा जस्तो च्यानल पार्टनरमार्फत आउने पैसा आउँदैन त्यसले पनि कम्पनी उक्त आम्दानीमा कमी आएको हो। नेपालबाट यस्ता एप प्रयोग गर्दा डाटा प्रयोग भएअनुसार आम्दानी हुने भएकाले त्यसले केही हदसम्म कभर गर्छ। यसका साथै यस्ता एप्सले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कल रेटमा पनि कमी आएको छ। भाइबर, स्काइप ह्वाट्सएपलगायत एप्ससँग प्रतिस्पर्धाका लागि इन्टरनेसनल कम्पनीले कल रेट घटाएका छन् यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत हुने आम्दानीमा कमी आएको एनसेलले जनाएको छ।
माघ ३ – पैसा कमाउने उद्देश्यले युट्यूब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ ? पर्खनुहोस् ! यूट्यूबले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अब स–साना फूटेज भिडियो र सामान्य तरिकाबाट युट्यूबमा पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन् । रमाइला भिडियो र अर्काका भिडियो चोरेर तोडमरोड गर्दै आफ्नो बनाएर पैसा कमाउनेका लागि युट्यूब त्यति सहज छैन अब । यसले गर्दा युट्यूबर बनेर पैसा कमाउने सोच बनाएका व्यक्तिलाई निराश बनाएको हुन सक्छ । त्यसो त अर्काका कन्टेन्ट पढेर भिडियो बनाएर पैसा कमाउनेका लागि युट्यूबले यसो गर्नु ठिकै पनि हो । अब दर्शकलाई ...
बागलुङ – साविकको धौलागिरीमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारलाई तीब्रता दिएको छ। नयाँ ठाउँमा सेवा विस्तारसंगै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन लागेको टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमको धौलागिरी शाखाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ दानामा थ्रिजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सात महिना पहिला टेलिकमले पहिलो पटक उक्त स्थानमा टावर राखेर जिएसएम मोवाईल सेवा विस्तार गरेको थियो। उक्त टावरबाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ का झण्डै छ सय घरधुरी लाभान्वित भएको नेपाल टेलिकम धौलागिरी शाखा प्रमुख केशव शर्माले बताए। ‘हामीले अहिले सेवा विस्तारसंगै गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमकिता दिएर काम ...
केही घण्टामै डुब्यो फेसबुकको २५ अर्ब डलर
पुस ३० – न्युज फिडमा ठुलो परिवर्तनको घोषणा गरेको फेसबुकले केही घण्टामै अर्बौँ डलर गुमाउनुपरेको छ । शुक्रवार स्टक बजारमा उसको सेयर मूल्यमा ५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ। जसका कारण फेसबुकले केही घण्टामै पुँजी बजारबाट करिब २.६१ लाख करोड रुपैयाँ (२५ अर्ब डलर) गुमाएको हो । फेसबुकले गत बिहीबार आफ्नो न्यूजफिड सर्भिसमा व्यापक परिवर्तन गरेको थियो । जुन फेसबुकले युजरका साथीको कन्टेन्टलाई धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गरी परिवर्तन गरेको थियो । फेसबुकको न्युज फिडमा परिवर्तनको निर्णयले उसको खातामा ठुलो असर पार्ने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । ...
साथी र आफन्तलाइ प्राथमिकतामा राख्न फेसबुकको नयाँ अपडेट
पुस २८ – फेसबुकले बिहिबार एक वृहत अपडेटको घोषणा गरेको छ जसले प्रयोगकर्ताको न्युज फिडमा फेसबुक पेज र सेलेब्रिटीभन्दा माथी साथी र आफन्तको अपडेटहरु देख्न पाइनेछ । साथै यसले प्रमुख सामाजिक संजालको रुपमा रहेको फेसबुकमा मानिसहरुले कम समय दिने संभावना देखिएको छ । न्युज फिड प्रोडक्ट व्यवस्थापक जोन हेजम्यानका अनुसार फेसबुकको यस्तो परिवर्तनले सामाजिक अन्र्तक्रिया र सम्बन्धलाइ थप उचाइमा पुर्याउने बताएका छ । यो निकै ठूलो परिवर्तन रहेको हेजम्यानले एएफपी लाई बताए । मानिसहरुले फेसबुकमा कम समय विताउने तर यसले प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकमा विताएको समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण ...
नेपाल आजदेखि चिनिया बाटो हुँदै इन्टरनेटको विश्व सञ्जालमा
काठमाडौं – नेपाल, आजदेखि चिनियाँ बाटो हुँदै इन्टरनेटको विश्व सञ्जालमा जोडिएको छ । नेपाल र चीनबीच बनेको क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकको उदघाटन भएसँगै नेपाल इन्टरनेटको अन्तराष्ट्रिय आवद्धतामा चीनसँग जोडिएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो । सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले ‘नेपाल टेलिकम र चाइना ग्लोबलबीच क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को औपचारिक उदघाटन गर्नुभएको छ । चीनसँग नेपाल इन्टरनेटमा जोडिएपछि अब इन्टरनेटमा समस्या नआउने वैद्यले जानकारी दिनुभयो । भारत र चीनसँगको इन्टरनेट आवद्धताले नेपाललाई इन्टरनेटको टा«न्सफर हव ...